U beddel qoraal si qallooca looga fogaado khaladaadka daabacaadda | Abuurista khadka tooska ah
U gudbi qoraal si aad u xoqdo ka fogow qoraallada khaldan waa lagama maarmaan marka la keenayo nooc kasta oo mashruuc ah daabacaadda. Haddii aan dooneyno inuu mashruuceennu si wanaagsan u socdo, nooc kasta oo dhibaato ah markay tahay daabacaadda, waa inaan taas hubinnaa qoraaladayada oo dhami way qalloocan yihiin hore.
Markaad qaadaneyso mashruuc garaaf ah si aad u daabacdo, waa inaad leedahay taxane ah arrimo farsamo joogo hadaan rabno inaan iska ilaalino madax xanuunka mustaqbalka oo aan gaarno a natiijada ugufiican.
Markii aan u qaadanno mashruuc garaaf ah madbacadda daabacaadda, waa wax aad u badan in nooc ka mid ah la haysto qalad fudud oo laga fogaado, ama midab khaldan, midab aan muuqan, ama si fudud a cillad qoraal. Waan iska ilaalin karnaa qaladaad badan iyo u gudbi qoraalka gooladaha ka hor intaadan dirin feylka si aad u daabacdo, waxay noqon kartaa midkood.
Qoraal waxaa iska leh a suugaanta qoraalka go'aamisay font aan si sax ah ugu arki karno kombuyuutarkeena laakiin markii faylka loo wareejinayo PC kale way naga xumaataa maxaa yeelay ma hayno rakibideeda. Waa inaan ogaano noocaas waa la soo bandhigayaa haddii kumbuyuutarka uu rakibay Sababtaas awgeed waa inaan u gudbino qoraalka gooladaha, haddii qalabka daabacaadda uusan lahayn xarfaha waxaa loo beddelayaa kuwa kale marka la daabacayo feylka.
1 Maxay tahay sababta qoraal ahaan loogu beddelayo gooladaha?
2 U beddelo qoraalka curves sawir leh
3 Waxyaabaha ay tahay in maanka lagu hayo marka qoraalka loo beddelayo gooladaha
Maxay tahay sababta qoraal ahaan loogu beddelayo gooladaha?
Waan iska ilaalineynaa khaladaadka qoraalka
Waxaan muujineynaa xirfad ahaaneed
Waxaan qaadnaa mustaqbal madax xanuun
U beddelo qoraalka curves sawir leh
Gudbi a qoraal ku wareeji waa wax aad u fudud oo dhakhso leh, oo leh hal click Waxaan maaraynaynaa inaan u gudbinno qoraalkeenna gooladaha sidaas awgeedna aan uga fogaaneyno qalad kasta oo xagga qoraalka ah markay tahay daabac qoraalka.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah dooro qoraalkayaga adigoo gujinaya
Marka aan helno qoraalka la soo xulay, dhagsiitab qoraalka ee menu-ka kore waxaanan raadineynaa ikhtiyaarka ah samee tilmaamo. Haddii wax walboo sifiican udhaceen, qoraalkayagu horeyba wuu qaloocayaa waana la daabici karaa iyada oo aan wax dhibaato ah jirin.
Waxyaabaha ay tahay in maanka lagu hayo marka qoraalka loo beddelayo gooladaha
Qoraalkeena dib dambe looma beddeli karo sidaa darteed waa inaan hubinnaa inaanan wax isbeddel ah ku sameynaynin qoraallada. Waxa ugu caadiga ah ee lagu taliyaa waa ku keydi qoraalka feyl kale adoon wareegin gooladaha haddii aan u baahanahay wixii isbeddel daqiiqad ah ee ugu dambeeya ah.
Mar dambe ma qori karno qoraalka (EEG)
Iyada oo hal ah click waan helnaa ka fogow nooc caan ah in mashruuc garaaf ah gebi ahaanba naga khaldami karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » U beddel qoraalka xargaha si looga fogaado khaladaadka daabacaadda
Barnaamijyada nashqadeynta marwalba waxaa jiray (waana) submenu kuu saamaxaya inaad iskudarsato labada sawir iyo xarfaha loo isticmaalay dukumintiga la diray si loo soo saaro. Looma baahna, sidaa darteed, in loo beddelo vector. Sidoo kale haddii dukumiintiga si dirqi ah loogu diro PDF, maaddaama sawirada iyo qaababkuba ay ku dhex jiraan. Waxaas oo dhan, dabcan, haddii aan ka hadalno xirfadleyda.
Jawaab Eugenio Gil
Xeerka sedex meelood